नायक सलिनमानले प्रेमिकालाई दिए यस्तो मँहगो गाडी उपहार, मूल्य सुन्दै उडनेछ होस ! - ramechhapkhabar.com
नायक सलिनमानले प्रेमिकालाई दिए यस्तो मँहगो गाडी उपहार, मूल्य सुन्दै उडनेछ होस !
नेपाली फिल्मका पछिल्लो समयका चर्चित नायक सलिनमान बानियाँ भने आफ्नी प्रेमिकालाई १ करोड माथिको गिफ्ट दिएका छन् । विगत ८ वर्षदेखि मेकअप आर्टिस्ट अस्प्रिना जिन्हा श्रेष्ठको प्रेममा रहेका उनले प्रेमिकालाई महंगो पर्ने गाडी उपहार दिएका हुन् । शनिवार अस्प्रिनाले इन्स्टाग्राम स्टोरीमा सेतो रंगको एक गाडीको तस्विर राख्दै सलिनमानबाट आफूले गिफ्ट पाएको उल्लेख गरेकी छन् ।
सलिनमान सम्पन्न परिवारका छोरा हुन् । फिल्म क्षेत्रमा उनी जति धनाड्य नायक अरु नभएको चर्चा पनि न भएको होइन। अर्को स्टोरीमा उनले सलिनमानलाई गाडीमा राखेर हिँडाएको एक भिडियो क्लिप्स पनि पोस्ट गरेकी छन् । अस्प्रिनाले प्रेमीबाट उपहारमा पाएको गाडी ‘प्यूजो ३००८’ हो । यो गाडीलाई नेपालमा एक करोड ३६ लाखदेखि ४५ लाखसम्म पर्ने गरेको छ ।
सलिनमान सम्पन्न परिवारका छोरा हुन् । फिल्म क्षेत्रमा उनी जति धनाड्य नायक अरु नभएको चर्चा हुने गरेको छ । उनका पिताको काठमाडौंमा ठूलो व्यवसाय रहेको बताइन्छ ।
सलिनमानले सोसल मिडियामा प्रेमिकासँगका तस्विरहरु पोस्ट गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु चाँडै विवाह गर्ने तयारीमा समेत रहेको चर्चा छ। फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ बाट नायकको रुपमा डेब्यू गरेका सलिनमान पछिल्लो पटक फिल्म ‘यात्रा’मा देखिएका थिए । यो खबर साभार गरियको हो । साभार हिमालयन डेली ।